कागज प्लेट निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन कागज प्लेट कारखाना
NINGBO CHANG लिआंग पेपर उत्पादन कं, लि
डिस्पोजेबल पेपर डिनर प्लेटहरू
पार्टी पेपर प्लेटहरू
क्रिसमस पेपर डिनर प्लेटहरू
कागज लंच बक्सहरू
वातावरणीय हिसाबले बिगार्ने...
बाह्र औंस डिस्पोजेबल प्याप...
पार्टी डिस्पोजेबल पेपर प्लेटहरू
हेलोवीन डिस्पोजेबल पेपर प्लेटहरू
हेलोवीन पेपर प्लेटहरू हामीले प्राय: प्रयोग गर्ने विषयवस्तु उत्पादनहरू हुन्। हाम्रा ग्राहकहरू सामान्यतया प्रत्येक वर्षको सुरुमा हाम्रो छुट्टी डिजाइनहरू डिजाइन गर्न थाल्छन्।
वातावरणीय रूपमा बिग्रेको पेपर प्लेटहरू
के तपाइँ अझै पनि पार्टी गर्दा गिलास वा सिरेमिक भाँडाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ? होइन, तपाईंले पक्कै पनि यी महँगो र सजिलै क्षतिग्रस्त उत्पादनहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छैन।
कस्टम डिस्पोजेबल पेपर प्लेटहरू
हामी चीनबाट कारखाना हौं: हामी सबै प्रकारका पेपर प्लेटहरू व्यावसायिक रूपमा अनुकूलित गर्न सक्छौं। जब तपाईं एक उत्पादन चाहनुहुन्छ, विचार र डिजाइन संग, हाम्रो कथा सुरु हुन सक्छ।
थोक डिस्पोजेबल जन्मदिन पार्टी परिवार सुपरमार्केट पेपर प्लेट। हाम्रा उत्पादनहरू विभिन्न आकार र आकारहरूमा आउँछन्: 7/8/9/10/12 इन्च, गोलाकार, वर्ग, जनावरको आकार, इत्यादि। हामी तपाईंलाई चाहिने कुनै पनि कुरालाई अनुकूलित गर्न सक्छौं। हामी 200g र 500g को बीचमा उच्च गुणस्तरको फूड ग्रेड पेपर सामग्री प्रयोग गर्छौं, हामी तपाईंले चाहेको कुनै पनि ढाँचा र रंग छाप्न सक्छौं। उत्पादन उत्पादन प्रक्रिया
थोक डिस्पोजेबल जन्मदिन पार्टी परिवार सुपरमार्केट पेपर प्लेट। हाम्रा उत्पादनहरू विभिन्न आकार र आकारहरूमा आउँछन्: 7/8/9/10/12 इन्च, गोलाकार, वर्ग, जनावरको आकार, इत्यादि। हामी तपाईंलाई चाहिने कुनै पनि कुरालाई अनुकूलित गर्न सक्छौं।
घर, सुपरमार्केट, रेस्टुरेन्ट, पार्टी र अन्य गतिविधिहरूमा, के तपाइँ अझै पनि प्लास्टिक डिस्पोजेबल उत्पादनहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ जुन वातावरण अनुकूल छैन? हुदै हैन। पक्कै होइन। हाम्रो मनपर्ने ningbo Changliang डिस्पोजेबल कागज उत्पादनहरू। यद्यपि, हामी तपाईंलाई चाहिने कारखाना हौं। हामी व्यावसायिक छौं। पेपर प्लेटहरू हामी कुनै पनि आकारका उत्पादनहरूको 7/8/9/10/11/12 इन्च उत्पादन गर्न सक्छौं, हाम्रो सामग्री 200g - 560g, फूड ग्रेड पेपर, वातावरणमैत्री, घट्न सक्ने।
परम्पराको एक हिस्सा बन्नुहोस्
© प्रतिलिपि अधिकार - २०१०-२०२२ : सर्वाधिकार सुरक्षित।